शनिबार, आषाढ १०, २०७४ साल
बाँके, असार १० गते । नेपाली काङ्ग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालगन्जमा भएको चुनावी भेला सम्बोधन गरेका छन् । नेपालगन्जको सिद्धार्थ कटेजमा भएको भेलामा विद्युत कटौतीका कारण बरिष्ठ नेता पौडेलले आप्mना भनाई सिलसिलेबद्धरुपमा राख्न समेत पाएनन् । पार्टीका नेता हदयराम थानी, जिल्ला सचिव तप्त पौडेले मन्तव्य राखेपछि मञ्चमा उक्लिएका पौडेल बोल्न लाग्दा करिब आधादर्जन पटक विद्युत आउनेजाने हुँदा पौडेलले राम्ररी..
कृष्ण, किस्मत र किशोरको क्षेत्रमा बामदेबको गर्जन
नेपालगन्ज, असार १० । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम शनिबार बाँकेमा भएका बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका मनिकापुरमा भएको चुनावी कार्यक्रममा उपाध्यक्ष गौतम सहभागी भए । सो वडामा एमालेबाट कृष्ण कार्की अध्यक्षका उम्मेदवार छन् । सो अवसरमा उपाध्यक्ष गौतमले एमालेका मेयर उम्मेदवार सम्सुद्दिन सिद्दिकी र उपमेयर शान्ति ढकालको विजयी सुनिश्चित भएको बताए । मनिकापुरपछि उपाध्यक्ष गौतम खजुरामा भएको..
मेयर उम्मेदवार राईको गाडीमा तोडफोड
नेपालगन्ज, असार १० । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार कमरुद्धिन राईको सवारी साधनमा तोडफोड भएको छ । बा ९ च ६५२९ नम्बरको स्कारपियो शुक्रबारराती नेपालगन्जको पासाङल्हामुमार्ग नजिकै तोडफोड भएको फोरम नेपालका प्रबक्ता समसुल हक राईले बताए । प्रचारात्मक गतिविधि सकेर घर फर्कनेक्रममा गाडीमा तोडफोड गरिएको हो । प्रहार गरी शिशा फुटाइएको छ । ..
नेपालगन्जको अभिभावक बन्छु – प्रचण्ड
बिहिवार, आषाढ ८, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार ८ । नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पुर्ब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि नेपालगन्जबासीको अभिभावकत्व आफुले ग्रहण गरेको बताएका छन् । सुशीलको निधनपछि हाम्रा कुरा सुन्ने राष्ट्रिय राजनीतिमा कोही छैन भनेर चिन्ता नलिनुहोस, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने,– नेपालगन्जबासीको अभिभावक म ग्रहण गर्नेछु, नेपालगन्जबासीको हीतमा म नेतृत्व गर्नेछु । उनले नेपालगन्ज प्रदेश नम्बर ५..
विकासको योजनासहित डुडुवामा शकील
बुधबार, आषाढ ७, २०७४ साल
बाँके, असार ७ – नेकपा एमालेका तर्फबट बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवार शकील अहमद खानले डुडुवाको समग्र विकास लागि आफुहरुसँग स्पष्ट योजना अहिले नै रहेको बताएका छन् । कम्दिको जव्दहवामा बुधबार भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्षका उम्मेदवार खानले भने,–हामी निर्वाचित भएपछि विकासका लागि योजना बनाएर समय खर्चिनेवाला छैनौं, किनकी हामीसँग अहिले नै समृद्ध डुडुवाको स्पष्ट योजना रहेको छ । कार्यक्रममा एमाले बाँकेका..
सम्सुद्दिन र शान्तिलाई भव्य स्वागत
नेपालगन्ज, ७ असार । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, सदस्य पदका उम्मेदवारहरुलाई बु्धवार वडा नम्बर १२ कोरियनपुरमा मतदाताहरुले भब्य स्वागत गरेका छन् । मेयर पदका उम्मेदवार समशुद्धिन सिद्धिकी, उपमेयर पदका उम्मेदवार शान्ती ढकाल, उक्त वडाका अध्यक्ष देबीदत्त ढकाल लगायतका सदस्य पदका उम्मेदवारहरुलाई मतदाताहरुले स्वागत गरेका हुन । बिहान भएको घरदैलोमा मतदाताहरु घर बाहिर निस्किएर उम्मेदवारहरुसंगै छिमेकमा मत माग्न..
समृद्ध नेपालगन्जका लागि डा. कनोडियाका ५ प्रतिवद्धता
बाँके, असार ७ – असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेसले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा गर्नुपर्ने काम समेटिएको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली कांग्रेस निर्वाचन प्रचार प्रसार समिति नेपालगञ्जले ‘समृद्ध नेपालगञ्ज’को अठोटसहितको प्रतिबद्धता पत्र बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार डा. सुरेश कुमार कनौडिया र उपमेयरका उम्मेदवार उमा थापा मगरको अठोटका रुपमा..
प्रचण्ड किन आउँदैछन नेपालगन्जमा ?
नेपालगन्ज, असार ७ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पुर्ब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोली बिहिवार नेपालगन्ज आउने भएका छन् । बाँकेको नेपालगन्ज लगायत बिभिन्न स्थानमा हुने सभालाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड नेपालगन्ज आउन लागेका हुन् । माओवादीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थितीमा खजुरा र कोहलपुरमा समेत सभा गर्ने तयारी गरेको छ । बाँकेका सभालाई सम्बोधन गरी अध्यक्ष प्रचण्ड बर्दिया र..
सोनपुरमा एमालेको बुथ कमिटी
मंगलवार, आषाढ ६, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार ६ । नेकपा एमालेले खजुरा गाउँपालिकामा बुथ कमिटी गठनलाई तिव्रता दिएको छ । गाउँपालिकामा रहेका अधिकाँश बुथमा बुथ कमिटी गठन भईसकेको भएपनि केही स्थानमा बाँकी रहेका कारण बुथ कमिटी गठनलाई तिव्रता दिइएको प्रमुखका उम्मेदवार किस्मतकुमार कक्षपतिले जानकारी दिए । मंगलबार वडा नम्बर ७ को सोनपुरमा रहेका ३ वटै बुथमा कमिटी गठन गरिएको छ । सयौंको संख्यामा पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकहरुको..
यि हुन नेपालगन्जका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार
नेपालगन्ज, असार ६ । असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १७ जनाले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैगरी उपप्रमुखमा ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रमुखमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी २७ बर्षिया ऋतु शाही सबैभन्दा कान्छी उम्मेदवार हुन भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिकका ६६ बर्षिया कृष्णप्रसाद खरेल सबैभन्दा बढि उमेरका छन् । यसैगरी उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका..
रातीमा गृहमन्त्री चुनावी प्रचारमा
नेपालगन्ज, असार ६ । निर्वाचन आचारसंहिता बिपरित गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा सोमबारराती बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको रनियापुरमा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । गृहमन्त्री शर्मा सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन सोमबार दिउसो नेपालगन्ज आएका हुन् । नेपालगन्जमा सुरक्षा गोष्ठीपछि पत्रकार भेटघाट र मुस्लिम समुदायको रोजा ईप्mतारमा सहभागी भई गृहमन्त्री शर्मा ९ बजेतिर रनियापुर पुगेका हुन् । रातीमा भएको चुनावी सभालाई मन्त्री शर्माले सम्बोधन..
नेपालगन्जमा माओवादी नेता एमालेमा
सोमबार, आषाढ ५, २०७४ साल
बाँके, असार ५ – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम पाठक नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । सोमबार आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका पुर्ब केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पाठक नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । नेपालगन्ज उपमहनगरपालिका १७ परस्पुरमा भएको कार्यक्रममा पाठकलाई नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले एमालेमा प्रवेश गराए । पाठकसँगै नेपाली जनता दल बाँकेका सचिव छोटेलाल सोनखर, संघीय..
नेपालगन्जस, असार ५ । नेकपा एमालेका तर्फबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुखका उम्मेदवार सम्सुद्दिन सिद्दिकीले नेपालगन्जमा छात्राहरुका लागि अलग्गै डिग्री कलेज आवश्यक भएको बताएका छन् । नेकपा एमाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ को निर्वाचन परिचालन कमिटीले सोमबार आयोजना गरेको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुखका उम्मेदवार सिद्दिकीले दुईबर्षभित्र नेपालगन्जमा छात्राहरुका लागि अलग्गै डिग्री कलेज स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले नेपालगन्जमा महिलाहरुका लागि छुट्टै डिग्री..
नेपालगन्ज, असार ५ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था छ । संविधान संशोधन बिना यथास्थितीमा निर्वाचन हुन नसक्ने अडानमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएको सरकारका एकजना प्रभावशाली मन्त्रीले बताएका छन् । सोमबार नेपालगन्जमा भएको सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय जनता पार्टी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा..
कमाण्ड सम्हाल्न बामदेव नेपालगन्जमा
नेपालगन्ज, असार ५ गते । असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ५ का पश्चिमी जिल्लाको कमाण्ड सम्हाल्न नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम नेपालगन्ज आईपुगेका छन् । गौतम प्यूठानमा भएका बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भई सोमबार नेपालगन्ज अईपुगेका हुन् । उनी सोमबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको परस्पुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी भए । गौतम बर्दियामा हुने बिभिन्न कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने..
सम्सुद्धिनको पक्षमा नेपालगन्जबासी
आईतवार, आषाढ ४, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार ४ । आईतबार भएको उम्मेदवारी मनोनयनकाक्रममा नेकपा एमालेले नेपालगन्जमा विशाल प्रदर्शन गरेको छ । नेपालगन्जका बिभिन्न भागको परिक्रमा गरेको जुलुस मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेको छ । एमाले जुलुसको अग्रभागमा मेयरका उम्मेदवार सम्सुद्दिन सिद्दिकी र उपमेयरका उम्मेदवार शान्ति ढकाल थिए । एमाले बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मो. हारुनले जुलुसमा देखिएको बिशाल सहभागिताले एमाले उम्मेदवारको विजय सुनिश्चित गराएको बताए । एमालेको..
जनगायक बद्री पंगेनीको कार्यक्रममा झड्प
नेपालगन्स असार ४ गते । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । झ्डपमा दुई प्रहरी सहित ७ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी टेकप्रसाद राईले स्थिती नियन्त्रणमा लिनका लागि ७ राउण्ड हवाईफायर र १२ राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको जानकारी दिनुभयो । मनोनयन दर्तापछि वारीपारी भएका माओवादी र एमाले कार्यकर्ताबीच भनाभन..
मनोनयनमा कसले दियो विजय यादवलाई तनाव
नेपालगन्ज, असार ४ गते । आईतबार उम्मेदवारी मनोनयनका लागि बनकटटीमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुग्दा फोरमको नाममा अर्कै व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेको फेला परेपछि विजयकुमार यादव तनावमा परे । यादव मात्रै होइन समर्थक समेत तनावमा परे । नेपाली काङ्ग्रेसका पुर्ब जिल्ला सचिव यादव एक महिना अघि दलबलसहित संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेश प्रवेश गरेपछि उनलाई पार्टीले डुडुवा गाउँपालिकामा प्रमुखको उम्मेदवार बनाउने..
डुडुवाबासीको साथ शकीललाई
बनकट्टी, असार ४ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुखमा शकील अहमद खानले उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैगरी उपप्रमुखमा कृष्णावती पाण्डेले उम्मेदवारी दिइन् । उम्मेदवारी दर्ताअघि बनकट्टीमा नेकपा एमालेको पक्षमा जनलहर उर्लिएको थियो । डुडुवाका ६ वटै वडाबाट हजारौं मतदाताहरु उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्दी पुगेका थिए । उम्मेदवारी दर्ताका लागि बनकट्टी पुगेका नेकपा एमालेका बैकल्पिक केन्द्य्रीय सदस्य मो. हारुनले..
किस्मतको पक्षमा उर्लियो खजुरामा जनलहर
खजुरा, असार ४ । असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको पक्षमा जनलहर उर्लिएको छ । कपास विकास समितिको कार्यालयमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी मनोनयनका लागि जानेक्रममा हजारौं खजुराबासी सहभागी भएका छन् । खजुराबजारमा रहेको एमालेको निर्वाचन परिचालन समितिको कार्यालयबाट हजारौं सहभागी र्र्याली खजुरा एक नम्बर हुँदै कपास विकास समितिको कार्यालयमा पुगेको..
सुरु भयो उम्मेदवारी मनोनयन
नेपालगन्ज, असार ४ । असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज आईतबार बिहान ८ बजेदेखि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सुरु भएको छ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र ६ वटै गाउँपालिकामा मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएकोछ । नेपालगन्जमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहानदेखि नै उम्मेदवारी मनोनयनको कार्य सुरु भएको छ । सुरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु उम्मेदवारी दर्ताका लागि निर्वाचन अधिकृतको..
काँग्रेस उम्मेदवारको आगनमा प्रतिष्पर्धीका कार्यक्रम
बिहिवार, आषाढ १, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार १ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ ईगाउँमा असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार तीव्र छ । स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरु आफु सम्वद्ध पार्टीको कार्यक्रममा सकेसम्म नछुटाई पुग्छन् । घरदैलोमा नाचगान हुन्छ । अधिकाँश ईष्टमित्र र नातेदारको बसोबास रहेको यस गाउँमा निर्वाचनका समयमा आप्नै मान्छेबीच पनि पार्टीगत कारणले राम्ररी कुरा हुन पाउदैन । निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा..
अब तीन दिनपछि मनोनयन
नेपालगन्ज, असार १ गते । असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन तीन पछि सर्ने भएको छ । सत्तारुढ दल र आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच उम्मेदवारी मनोनयन तीनदिनपछि सार्ने सहमती भएको हो । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार भोली शुक्रबार उम्मेदवारी मनोनयन हुने कार्यक्रम थियो । सत्तारुढ दल र राजपाको बैठकले प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय..
कसले दियो धवल शम्शेरलाई तनाव ?
मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ साल
नेपालगन्ज, जेठ ३० । डा. धवल शम्शेर राणा पछिल्लो दुई दशकको अवधीमा अधिकाँश निर्वाचनमा प्रत्यासी भएका छन् । २०५४ सालमा नेकपा एमालेबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएका डा. राणा त्यसपछि २०६४ मा राप्रपा र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपा नेपालबाट प्रतिष्पर्धा गरे । ७० को निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको निकटतम प्रतिष्पर्धी भएका डा. राणा..
मेयरका उम्मेद्वार कनोडियाको गाडी तोडफोड
नेपालगन्ज, ३० जेठ, निर्वाचन बिथोल्न आन्दोलनको घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले नेपालगन्जमा एक स्कारपियो गाडीमाथि तोडफोड भएको छ । काँग्रेसबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार डा. सुरेशकुमार कनौडिया चढ्ने गाडीमा बन्दकर्ताले तोडफोड गरेका छन् । नेपालगन्जको त्रिभुवन चौकमा आज विहान भएको तोडफोडबाट गाडीको अगाडी पट्टीको शिशा फुटेको बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक सरोज पौडेलले जानकारी दिए। अगाडी अटोरिक्सा थियो एक्कासी बन्दकर्ताले..
पत्रकार पाण्डेलाई अच्युत सुवेदी स्मृति राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार
सोमबार, जेष्ठ २९, २०७४ साल
नेपालगन्ज, जेठ २९ । भुकम्पमा परि ज्यान गुमाएका नेपालगन्जका युवा उद्यमी अच्युतराज सुवेदीको स्मृतिमा स्थापना गरिएको अच्युत सुवेदी स्मृति राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार’बाट पत्रकार गणेश पाण्डेलाई सम्मान गरिएको छ । उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सोमबार पाण्डेलाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । सो अवसरमा स्व. सुवेदीका माता पिता समेत रहेका पुर्व उपसभामुख पुर्ण सुवेदी र माओवादी नेता प्रकाश सुवेदी,पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा...
सरकार र राजपाले चाहदैमा निर्वाचन सर्दैन
कोहलपुर, जेठ २९ गते । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टीले चाहदैमा अब निर्वाचनको मिति नसर्ने बताएका छन् । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा सोमबार बिहान आयोजित उम्मेद्वार घोषणासभामा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा आप्mनो पार्टीको हार निश्चित देखेपछि सत्ता गठबन्धन र उसलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन सार्न चलखेल गरिरहेको दावी गरे । असार १४ गते तोकिएकै मितिमा स्थानीय..
डुप्लीकेट मुस्लिम उम्मेद्वारबाट सजग बनौं
आईतवार, जेष्ठ २८, २०७४ साल
नेपालगन्ज, जेठ २८ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब फेरी स्थानीय तह दोस्रोचरणको मिति परिवर्तन नहुने बताएका छन् । असार १४ गते तोकिएको स्थानीय तहको दोस्रोचरणको निर्वाचनको मिति कुनैपनि हालतमा परिवर्तन हुन नसक्ने अध्यक्ष ओलीले बताए । नेकपा एमालेले आईतबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उम्मेद्वार घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भने,– असार १४ गते तोकिएको..
यि हुन काँग्रेस बाँकेका उम्मेद्धार
शनिबार, जेष्ठ २७, २०७४ साल
नेपालगन्ज, जेठ २७ । नेपाली काँग्रेसले बाँकेका स्थानीय तहका लागि उम्मेद्धारहरुको करिब टुंगो लगाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले सम्भवतः आज दिउसोसम्म उम्मेद्धारहरुको अन्तिम नाम सार्वजनिक गर्ने काँग्रेस स्रोतले जनाएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा डा. सुरेशकुमार कनोडियाको नाममा निर्णय भएको छ । उपप्रमुखमा युवा नेतृ उमा थापा उम्मेद्धार हुने सम्भावना सबैभन्दा बलियो छ । थापालाई रोक्न खोज्ने समूहको दबाबका कारण उम्मेद्धारहरुको..
अमर खड्का माओवादीमा
नेपालगन्ज, जेठ २६ । नेपाली काँग्रेस बाँकेका प्रभावशाली नेताको रुपमा रहेका अमर खड्का पार्टी परित्याग गरी नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । खड्का शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रम गरी समर्थक सहित माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् । खड्का समर्थकहरु गौरब श्रेष्ठ, बिक्रम शाही, दीपक केसी, शम्भु बुढाथोकी, शंकर बुढाथोकी, बिष्णु चिडिमारसहितको समूहसहित माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेस बाँकेको निवर्तमान..
Results 1048: You are at page 26 of 35